Albeyrak oo ku dhawaaqday in Dekeda Muqdisho shaqeyneyso 24-saac - Jowhar Somali news Leader
Home News Albeyrak oo ku dhawaaqday in Dekeda Muqdisho shaqeyneyso 24-saac
Albeyrak oo ku dhawaaqday in Dekeda Muqdisho shaqeyneyso 24-saac
Shirkadda Albeyrak oo gacanta ku heysa Maamulka Dekeda Muqdisho ayaa ku dhawaaqday in Dekeda Muqdisho ay shaqeyn doonto 24-saac, si howsha ka socota Dekeda ay u noqoto mid xiriir ah.
Muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ku soo kordhiyay ciriiriga waddooyinka, kaasoo ay keenaan baabuurta xamuulka ah ee Dekedda Muqdisho aka soo qaada badeecadaha, sidaas darteed Shaqada ka socotay Dekeda oo aheyda mid maalinle ah laga dhigay habeen iyo maalin inay shaqada socoto, si aan kala joogsi laheyn.
Shirkadda Albeyrak ayaa nalal waa weyn ee iftiinkooda aad u sarreeyo ku xirtay Dekeda Muqdisho, si ay u fududaato habsami u socodka howlaha Dekeda ee xilliga habeenkii.
Sidoo kale Shirkadda ayaa sheegtay inay ku dadaaleyso in Dekeda Muqdisho ay noqoto mid la jaan-qaada habka ay u shaqeeyaan Dekadaha Caalamka oo kale in la shaqeeyo 24 saac, si Dekedu u noqoto mid caalami ah.
Shaqada iyo socodsiinta howlaha Dekeda Muqdisho ee 24-saac iyo kala hagida nidaamka ciidamada ilaalada waddooyinka waxay keeni doontaa inuu yaraado ciriiriga iyo saxmada ay sababaan baabuurta xamuulka ee isticmaala waddooyinka Muqdisho.